Ayiyi ndawo iGenerations entsha – Vundla | News24
Ayiyi ndawo iGenerations entsha – Vundla
Cape Town – Ngalesi sikhathi ababukeli sebeqala ukuthobisa izinhliziyo bajwalele iGenerations: The Legacy, kungenzeka ukuthi lo mdlalo ungasabonakala kumabonakude.
Lokhu kuzokwenzeka uma abalingisi abangu-16 abaxoshwa kuGenerations ngonyaka odlule bephumelela esicelweni abazosifaka enkantolo ngoLwesibili sokuthi kumiswe lo mdlalo omusha, kusho umbiko weCity Press.
La balingisi abakhonjwa indlela baxwayise uMfundi Vundla, owabaxosha kubangwa indaba yamaholo, ukuthi uma iGenerations: The Legacy ibonakala emoyeni ngoMsombuluko ebusuku, bazobabela eNkantolo eNkulu yaseSouth Gauteng ngoLwesibili.
OLUNYE UDABA: Abaxoshwa bafuna kumiswe iGenerations: The Lagacy
UVundla uqinisekisile ukuthi uyazi ngalolu daba lokuthi kunezinyathelo zomthetho azothathelwa zona, wathi kodwa iGenerations: The Legacy izoqhubeka nokubonakala ku-SABC1 njengenjwayelo.
“Ngizwile ngezinyathelo zomthetho, engikwaziyo mina ukuthi lo mdlalo uzoqhubeka, thina sinenkontileka ne-SABC, hhayi nabalingisi,” kuqhuba uVundla.
Okhulumela i-SABC uKaizer Kganyago naye uthe abanazo izinhlelo zokumisa iGenerations: The Legacy.